कृषि, पशु, पर्यटन, शिक्षा, पूर्वाधार, उद्यमशीलता र मानव विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ : अध्यक्ष सेन, कपुरकोट गाउँपालिका - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
राससः कपुरकोट गाउँपालिकामा अहिले केकस्ता क्रियाकलाप भइरहेका छन् ?
राससः पछिल्लो पटक कोरोनाको सङ्क्रमण जिल्लामा व्यापक रह्यो तर पनि यहाँ आफ्नो गाउँपालिकामा पूरै नियन्त्रण गर्न सफल हुनुभएको छ, यो कसरी सम्भव भयो ?
सेनः कपुरकोट गाउँपालिका कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने मुख्य नाका पनि हो । यस नाकाबाट भारतलगायत विभिन्न देशबाट फर्केका तथा देशका विभिन्न शहर बजारबाट मानिसहरु कर्णालीका विभिन्न जिल्ला भित्रने गर्छन् । यसर्थ कोरोनाको जोखिम पनि देखिने भइहाल्यो । यही कुरालाई ध्यानमा राखी हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारसंँगको समन्वयमा गत चैत १ गतेदेखि नै कपुरकोटमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर २४ सै घण्टा ज्वरो जाँच तथा आवश्यक परामर्श दिने कार्य गरेका छौँ । चैत १ देखि असार मसान्तसम्म ५३ हजार ६ सय ९८ पुरुष र १५ हजार ९९३ महिला गरी जम्मा ६९ हजार ६९१ जनाको स्क्रिनिङ गरियो । यसका साथै वडाध्यक्षहरुको संयोजकत्वमा सबै वडाहरुमा सतर्कता समिति गठन गरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट बच्ने उपायका बारेमा व्यापक जनचेतनाका सन्देश विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट समेत घरघरमा पु¥याउने काम गरेका थियौँ भने ६ वटै वडाका गाउँ, टोलमा ३६ वटा निगरानी समूह गठन गरी विदेशबाट घर फर्किएकाहरुलाई घरपरिवार र छरछिमेकको सम्पर्कमा जानुभन्दा पहिला आवश्यक परामर्श गरी क्वारेन्टिन, सामुदायिक क्वारेन्टिन राख्ने, उहाँहरुको स्वाब सङ्कलन गरी प्रयोगशाला पठाउने र पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र घर पठाउने, गाउँटोलमा लकडाउनको पालना गर्न लगाउने काम त्यतिखेर अलि कडाइपूर्वक ग¥यौँ । गाउँपालिकास्तरीय तथा सामुदायिक क्वारेन्टिन, आइसोलेशनको व्यवस्था गरेर कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभावकारी उपचारका लागि विभिन्न कदम चाल्यौँ । नागरिक समाज, राजनीतिक दल सबैसंँग समन्वय, सहकार्यका आधारमा हामीले कोरोनाविरुद्धका अभियान सञ्चालन ग¥यौँ । अहिले पनि आवश्यक सचेतना र सावधानीका प्रयास गरिरहेका छौँ । यस भाइरसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिले नागरिकलाई पनि थाहा भइसकेको महसुस हामीले गरेका छौँ तर पनि गाउँमा कोरोना पूर्ण नियन्त्रणमा नआए पनि अवस्था भने नियन्त्रणमा रहेको महसुस हामीले गरेका छौंँ ।
राससः यहाँको गाउँपालिका जिल्ला प्रवेश गर्ने मुख्य नाका पनि हो, कोरना सङ्क्रमणका लागि यहाँहरुले जिल्लाका अन्य स्थानीय तहभन्दा बढी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आयो । यसलाई यहाँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो ?
राससः यहाँहरुले गाउँपालिकामा आइसोलेशन पनि तयारी गर्नुभयो । अब त विद्यालय पनि खुलिसके, त्यसको व्यवस्थापन र नयाँ आइसोलेशन निर्माणमा यहाँहरुले के गरिरहनुभएको छ ?
राससः यहाँले आफ्नो गाउँपालिकामा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले र आइसकेपछि यहाँले देखिने गरी गरेका कार्य केके छन् जसले गाउँपालिकामा तपाईँ आएपछि परिवर्तन भएको जनताले महसुस गरिरहेका छन् ?
राससः तपाईँको गाउँपालिका बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि चर्चित ठाउँ पनि हो । यहाँले बेमौसमी तरकारी खेती प्रवद्र्धनका लागि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका लागि कस्तो योजना निर्माण गरेर लागु गर्नुभएको छ ?
राससः पछिल्लो पटक यहाँको गाउँपालिकामा उत्पादन भएको तरकारीमा विषादीको प्रयोग अधिकतम भयो । यसलाई न्यूनीकरण गर्नतिर लाग्नुपर्छ भन्ने छ । गाउँपालिकाबाट यसका लागि यहाँले कस्तो पहल गर्नुभएको छ ?
राससः यहाँले कपुरकोट गाउँपालिकालाई चिनाउनका लागि करीब साढे तीन वर्षका अवधिमा केकस्ता गतिविधि गर्नुभयो । साथै गाउँपालिकाका महत्वका विषयलाई कसरी उठान र सम्बोधन गर्नुभएको छ ?
राससः कपुरकोट गाउँपालिकामा यहाँले देख्नुभएको मुख्य समस्या के हो र यसको समाधानका लागि गाउँपालिकामा कस्तो खालको रणनीतिक योजना बनाउनुभएको छ ?
राससः जनताका समस्या समाधान गर्न खोज्दा कस्ता खालका चुनौती सामना गर्नुभएको छ ?
राससः पहिले गाविस हुँदा जनताले पाउने सेवासुविधा र अहिले गणतन्त्र स्थापना भई गाउँगाउँमा सिंहदरबारबाट प्रवाह हुने सेवामा कस्तो भिन्नता पाउनुभएको छ ?
राससः गणतन्त्र स्थापनापछि गाउँपालिकावासीले आफूहरुको शासन छ भनेर महसुस गर्नका लागि गाउँपालिकाले मुख्य गरी कुनकुन क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ?
राससः अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहँदा आफैँले निर्माण गरेका नीतिनियम, पुरानो कर्मचारी संरचना, कागजी प्रक्रिया, बजेट अभाव जस्ता कुराले कहिलेकाहीँ समस्या ल्याउँछन कि ल्याउँदैनन् ?
राससः अब त तपाईहरुको पाँचवर्षे कार्यकाल पनि सकिँदैछ । यस अवधिमा यहाँहरु जनताका अगाडि गरेका वाचाअनुसार कतिको काम गर्न सफल हुनुभयो र अब गाउँपालिकाभित्र गर्नुपर्ने बाँकी काम केके छन् ?
राससः अन्तिममा यहाँले भन्न छुटाउनु भएको कुनै कुरा बाँकी छ कि ?